Ku cadaadin mashruuca hadalka ee Emmanuel Macron - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA »Ku cadaadin hadalka hadalka Emmanuel Macron
Dhowr warbaahin Faransiis ah ayaa helay nuqulka hadalka ah ee Emmanuel Macron uu ahaa in la keeno isniinta. Waxay muujinayaan in madaxweynaha Faransiisku uu isku dayayo in uu isudheello hawlgabka yaryar ee sicirbararka, isaga oo dejiyey RIC maxaliga ah kana saaraya ENA.
Dhowr warbaahin oo Faransiis ah - oo ay ku jiraan AFP, aduunka et RTL - waxay gacmahooda ku qaateen hadalka qabyada ah in Emmanuel Macron waa inuu Isboorti Isniinta 15 April si uu uga jawaabo dhibaatada cayayaanka jaalaha ah. Waxay daabacaan Talaadada 16 Abriil tallaabooyinka sumcadda. Madaxweynaha Faransiiska ayaa rabay inuu ku dhawaaqo "canshuurta jarista" fasalada dhexe ", iyada oo la bixinayo cabbirkaan si gaar ah" cidhib tirka canshuurta qaar ".
Dib u soo kabashada ISF
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa sidoo kale codsanaya "qiimeyn ujeedo" ah oo ka mid ah ISF laga bilaabo bilawgii sanadka 2020, iyada oo ku saleysan taas oo uu ku oogi doono "inuu sameeyo wax-ka-beddelka iyo hagaajinta lagama maarmaanka u ah".
Sida laga soo xigtay dukumiintiga AFP, madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kale ujeedkiisu ahaa in uu sameeyo ficil u dhigma dadka hawlgabka ah iyada oo raacaysa baahida loo qabo in dib loo dhigo lacagta hawlgabka ee ka yar 2 000 euros oo ku saabsan sicir bararka.
Madaxa Dowladdu wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay in qiimaha aan caadiga ahayn ee 1 000 Euro-ga aan canshuurta lahayn iyo iyada oo aan wax faa'iido bulsho ah la go'aamin dhammaadka Diisembar 2018 si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa Geela jaalle waxay noqon doonaan "waara" oo ay u furan yihiin loo shaqeeyayaasha sanad walba.
Heshiiska muwaadiniinta ayaa soo badanaya
Emmanuel Macron "waa uu ku faraxsan yahay" in codsiyada dadwaynaha ee loo yaqaan 'RICs', oo loogu yeeray "Jaalaha Jaalaha ah", "waxaa loo samayn karaa mawduucyo gaar ah oo danta degaanka". Waxa kale oo uu "u hoggaansamayaa sidii loo fududeyn lahaa, iyada oo la fududeynayo sharciyada", aftida qorshaha wadajirka ah (RIP), oo ay bixiso Dastuurka laakiin aad u adag in la hirgeliyo. Waxa uu ku dhawaaqay in "shirwaynaha muwaadiniinta 300 la soo saaray" ayaa la dhisi doonaa "bisha soo socota", bisha May, isaga oo mas'uul ka ah "shaqada ku saabsan ku-meelgaarka ah ee dib-u-habeeynta iyo dib-u-habeyn qaas ah".
Qirashada "in badan oo ka mid ah muwaadiniinteena waxay dareensan yihiin in dhulkooda ay ka tageen," madaxa madaxtooyada ayaa jeclaan lahaa "hubinta joogitaanka adeega dadweynaha [iyo]" furitaanka ficil cusub oo ah baahinta xukunka ", oo ay ku jirto" in ka badan saraakiisha garoonka dhexdiisa, mas'uuliyado badan "," iyo "saraakiisha yaryar ee Paris si ay u qoraan heerarka ama abuuraan sharciyo". Waxa uu ku dhawaaqay, iyada oo loo marayo ballanqaad "inaysan jirin iskuul [ama] isbitaal [ay dhici doonaan] ilaa dhamaadka muddada shan sano ah", "ilaa maydka maydku weydiiyo".
Sida ku xusan dukumiinti, Emmanuel Macron ayaa sidoo kale qorsheeyay in uu joojiyo ENA, Dugsiga Qaranka ee Maamulka - calaamad u ah dad badan, farsamooyinka Faransiiska iyo sameynta fasal siyaasadeed oo ka fog xaqiiqda.
"Elysee ma xaqiijin ama faallo ka bixinaysa xakamaynta saxaafada ee ku saabsan sii deynta doodda qaran ee weyn," ayaa ka jawaabay madaxwaynaha, ka dib markii la daabacay qoraalka warbaahin badan.
Qormo Isha: https://www.france24.com/en/20190416-france-emmanuel-macron-allocution-prevue-announce-retraite-ric-suppression-ena
Waa maxay Macrradu waa inay ku dhawaaqday hadalkiisa